ဖက်ရှင်အိတ်အိတ် - သားရေ, တရားစွဲ, ထိုးပြီး, ပခုံး, အားကစား, ဖိနပ်
အိတ်-အိတ် - 44 ဓါတ်ပုံကိုဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့အိတ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်နည်း
ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးအိတ် - တစတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဒါပေမယ့်လည်းသင်တို့ရှိသမျှသည်အခြေခံလိုအပ်ချက်များသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုမယ့်နေရာလေးကိုလက်ထောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ် stylist ၏ကွဲပြားခြားနားရွေးချယ်ရေးမဆိုပုံရိပ်နှင့်အခွအေနေနှင့်အတူလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကြိုက်တတ်တဲ့။ ထိုခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုအလေးအိတ်-အိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီဇိုင်နာများ၏နောက်ဆုံးပေါ် collection များကိုဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းမှအထူးအလေးဂရု။ စတိုင်ပုံစံကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအနေဖြင့်တင်ပြလှပအဆင်ပြေပရိဘောဂနှင့်ပုံစံမျိုးနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းခြင်း, တစ်ဦးရိုးရှင်းသောစတိုင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤပုံစံ၏အားသာချက်များကိုအစဉ်အမြဲအာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရာသည်၎င်း၏ spaciousness, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်း, ထုံးစံ-ဖြတ်လိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ ခက်ခဲ konstruktirovat အမှုအရာသည် - သို့သော်တစ်ဦးသိသိသာသာမရှိခြင်းလည်းမရှိ။ ဘယ်လိုဂရုတစိုက်သင်သည်သူတို့နေဆဲကျပန်းဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အသုံးအဆောင်များ, အိပ်မရပေသည်။ ဒါပေမယ့်ဖွင့်အများဆုံးဖက်ရှင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကြည့်ကြကုန်အံ့:
သူ၏ပခုံးကိုကျော်အိတ်-အိတ်။ နေ့စဉ် wear များအတွက်အများစုကအဆင်ပြေရဲ့ style အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝတ်ဆင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်ရှည်လက်ကိုင်နှင့်အတူတက်ကြွစွာမော်ဒယ်စဉ်းစားနေကြသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဟောင်းခန္ဓာကိုယ် ။ မကြာခဏသိုင်းကြိုးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများပေးစေခြင်းငှါချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
အားကစားမော်ဒယ်များ။ ဒါဟာပေါ်ပြူလာကလေ့ကျင့်ရေးဘို့မိမိတို့ပြေးဖိနပ်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အိပ်မှအဆင်ပြေသောသိပ်သည်းအထည်အလိပ်အိတ်, ကျောပိုးအိတ်, ဖြစ်ကြသည်ကိုပထမဦးဆုံးရာသီမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောဂျနေ့စဉ်အဘို့သင့်လျော်သည်နှင့်အထူးသဖြင့်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းသို့မဟုတ် Printed အတွက်ဦးညွှတ်။
manual format နဲ့။ လှပသောအတိုသိုင်းကြိုးသို့မဟုတ်ကွင်းဆက်နှင့်အတူယဉ်လက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတန်းစီဖို့ဆက်လက်။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်များမကြာခဏတိုတောင်းတဲ့ပုံစံရှိသည်နှင့်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ကြော့လေးကိုများအတွက်အရေးကြီးသောအရာတောက်ပကျောက်, sequins, ပန်းနှင့်အတူပြည့်စုံ clutch ။
ခါးဒီဇိုင်း။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းခါးမှာဝတ်ဖို့ဒီဇိုင်းအတွက်ပေးအပ်သည်။ wide-ချုပ်ကိုင်သိုင်းကြိုးတစ်ဦးစတိုင်ဝဲဣတ္ silhouette နှင့်အဆင်ပြေလက်ထောက်လက်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူကအမြဲရှိလိမ့်မည်။
အဆိုပါ knitwear collection များကိုလူကြိုက်များ soft frameless ပုံစံ။ Wizards ကျယ်ဝန်းများနှင့်အလှဆင်အိတ်ဆက်ကပ်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစားမော်ဒယ်များနေ့စဉ်လေးနှင့်ကမ်းခြေအပေါ်လျှော့ပေါ့အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ အသေးစားပုံစံကိုတစ်ဦးစတိုင်ထို့အပြင်ရင်ခုန်စရာဣတ္ကြည့်ကြလိမ့်မည်။ ဖက်ရှင်အိတ်, အိတ်နှစ်ဦးစလုံးဆောင်းရာသီနဲ့နွေရာသီကြိုးကနေတင်ဆက်ထားပါသည်။ ဒီဇိုင်နာများစကားပြောနှင့်ချိတ်သုံးပါ။ မဲလင့်လောင်စာများကြိုးကနေစတိုင်နဲ့အထင်ကြီးကြည့်ထုတ်ကုန်။ ကျစ်, Arana, အရွက်, ပြန်တယ်နှင့်အခြားအဆင်တန်ဆာ - တစ်ဖက်ရှင် finish ကိုမကြာခဏအရောင်အဆင်းဇာထိုးပုံစံများပြုမူ။
ဒီစတိုင်ကနဦးအသှငျအပွငျအပျော့ကသဘာဝချည်မျှင်နှင့်အထည်ကနေစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သူ့ဟာသူဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့်စီရီရယ်၏သိုလှောင်မှုအတွက်ဖုံးလွှမ်းသည့်အထည်အလိပ်ထံမှလာ၏။ ယနေ့ဒီဇိုင်နာများအိတ်၏ခေတ်သစ်ပုံစံကိုပြောင်းလဲသွားပေမယ့်မကြာခဏ burlap ပိတ်, ဂုန်ကိုအသုံးပြုဖို့ပါပွီ။ အဆင်ပြေအထည်အလိပ် finish ကိုရန်၎င်း၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်လုပ်ဆောင်တယ်။ အဆိုပါ overhead ပုတီးအပြင်, ကျောက်, သံကြိုးနှင့်ကြိုးမကြာခဏလက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ကြသည်။ စတိုင်ရှေးခယျြမှုပစ္စည်းများစပ်ချုပ်ပညာရဲ့အနုပညာအတွက်မော်ဒယ်တစ်ဦးအမျိုးမျိုးကွဲပြားဆင်ခြင်၏။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးထိုထုတ်ကုန်များမှာ:
ဒင်ဗာမြို့မှ။ ဒီ option ကအလွန်လက်တွေ့ကျပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီမော်ဒယ်များနေ့စဉ်တက်ကြွစွာ wear များအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။
ကတ္တီပါ၏။ လှပသောညနပေိုငျးထည်ခေတ်မီ၏ပုံရိပ်နှင့်ဇိမ်ခံတစ်ဦးတို့ထိရန်ကထပ်ပြောသည်။ ထိုသို့သောတစ်ခု option ကိုညနေပိုင်းတွင်ကြက်သွန်နီအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဝါဂွမ်း။ ဝါဂွမ်းမော်ဒယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်။ ဒါကစပျစ်သီးသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာစတိုင်နှင့်ကျယ်ဝန်သောပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုစုံစုံဗားရှင်းဖြစ်နိုင်သည် ကမ်းခြေဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် နှင့်မြို့ပြ wear ။
သင်ဤပုံစံကိုရွေးချယ်ပါက, ပြုလုပ်ခြင်းသည်အခြေခံဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်တရားစွဲထားထုတ်ကုန်အာရုံစိုက်။ သာယာသော soft ထည်သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုမှဣတ္နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအလေးပေး။ အိတ်နှင့်တူသောပုံသဏ္ဌာန်ကိုဖော်ပြရန်, ဒီဇိုင်နာများထူအခြေခံအုတ်မြစ်မြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်ကဆက်ပြောသည်။ သို့သော်အိတ်-တရားစွဲအိတ်အောက်ခြေမပါဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုကြီးမားတဲ့နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နည်းနည်း form မှာသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးမကြာခဏတိုတောင်းတဲ့လက်ကိုင်အပေါ်ကိုယ်စားပြုသည်။ စတိုင် finish ကိုတရားစွဲမြိတ်ထုတ်ကုန်လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ဖြီး။ ဒီ lineup ခုနှစ်တွင်နွေးပျူငှါနွေးထွေးသောအရောင်များကလွှမ်းမိုးနေသည်။
သားရေအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်သည့်စတိုင်အတွက် image ကိုများအတွက် universal ရွေးချယ်မှု။ leather အမျိုးသမီးအိတ်အိတ်အမြဲစတိုင်ပုံသဏ္ဍာန် accentuates တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာအောက်ခြေရှိပါတယ်။ ယနေ့အထိ, ဒီဇိုင်နာများပျော့နှင့်သိပ်သည်းနှစ်ဦးစလုံးပစ္စည်းများအနေဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုဆက်ကပ်။ သို့သော် stylist အိတ်, သားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အိတ်ရွေးချယ်ရာတွင်အကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုတာရှည်ခံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှုသည်။ စတိုင်ပုံစံဒီဇိုင်းချောမွေ့ဖြစ်သို့မဟုတ်တွားသွား၏အရေပြားအောက်အာရုံစူးစိုက်မှု, ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ပုံစံများ, ဖောက်ထားသို့မဟုတ်ဖောင်းကြွပုံစံများကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စုံစုံယွန်းရတဲ့အရာတွေ finish ကိုရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီနေ့ရဲ့စျေးကွက်, သင်တစ်ဦးချင်းဦးစားပေးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီစတိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ collection များကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ပြပွဲဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးစတိုင် option ကိုဖွင့်ကောက်လို့ရပါတယ်။ branded မော်ဒယ်များအမြဲအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းမှလူကြိုက်များကျေးဇူးတင်စကား, မူရင်းဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများရရှိမှု, ရှေ့ဆက်ချီတက်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလူကြိုက်အများဆုံးထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသိပါစေ:
Muun အိတ်-shaped အိတ်။ ဒီအမှတ်အသား၏မော်ဒယ်အမှန်တကယ်ထူးခြား၏။ တချို့ကအမျိုးအစားစျေးဝယ်ဖို့က attribute ။ အမှတ်တံဆိပ်အိတ်ကိုဒီဇိုင်နာများတစ်အိတ်အဖြစ်နေရာယူထားကြပြီ။ အတွင်းနံရံညှို့နဲ့ပျော့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပုံသူမကရက်ကောက်ရိုးစတုဂံသို့မဟုတ်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူပြီးဆုံးကြောင်းအဆိုပါတကယ်တော့။
Gucci အိတ်အိတ်မော်ဒယ်များ။ အကြိုက်ဆုံးနောက်ဆုံးရာသီနာမည်ကျော်အီတလီအမှတ်တံဆိပ်များမှအိတ်ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်နာများပျော့တရားစွဲ, ကတ္တီပါနှင့်ပေါင်းစပ်အထည်တစ်ဦးမတူညီကြရွေးချယ်ရေးဆက်ကပ်။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးတိုတောင်းတဲ့လက်ကိုင်နှင့်အတူသားရေအိတ်-အိတ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Moschino ။ အမှတ်တံဆိပ်၏ collection များကိုတိုင်းအရသာများအတွက်စတိုင်စတိုင်တစ်ရွေးချယ်ရေးပေးထားပါတယ်။ သင်သည်အဘယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမြိုးသမီးတနှင့် Admiral ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခုစတိုင်ဖြေရှင်းချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည် လူငယ်စတိုင် ။ အားလုံးအိတ် Moschino ပြီးနောက် - ကအရောင်တောက်တောက်နဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်အရောင်များဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်ထုတ်ကုန်ကနေဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များအကြားအဓိကကွာခြားချက်အရောင်များအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ပါသည်။ အိတ်အိတ် Furlo အမြဲသင့်ရဲ့လမ်းတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောလေသံဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှန်မှာထိုဖက်ရှင် collection များကိုထဲမှာတောက်ပတင်ပြခြင်းနှင့်လှပသောရွှေကိုထိုစာလုံးနှင့်အတူဂန္အရောင်အတွက် monochromatic အရောင်များ, ပျော့ပျောင်းသော pastel နှင့်မိုနိုခရုမ် Win-Win ပြည့်နှက် - အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြစ်တယ်။
အီတလီအမှတ်တံဆိပ်များမှဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ခြွင်းချက်အရည်အသွေး, အဘယ်သူမျှမသံသယ။ သို့သော်ဒီဇိုင်နာများဖက်ရှင်လက်တွေ့ကျတဲ့ဖက်ရှင် collection များကိုအလွန်အံ့သြစေရန်ငြိမ်းကြပါဘူး။ အနက်ရောင်လက်ဆွဲအိတ်, အဝါရောင်အနီ, အပြာနှင့်အခြားအရောင်များအတွက်တင်းကျပ်သောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တောက်ပမိုနိုခရုမ်အရောင်များများအတွက်လူငယ်စတိုင်လ်၏ပရိသတ်များအဘို့ - လတ်တလောရှိုးပွဲများတွင်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုကိုယ်နှိုက်ကမတူညီတဲ့ပုံစံဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဇိုင်နာများပျော့ပိရမစ်၏ပုံစံအတွက်စံပုံစံနှင့်ထွက်ဖြောနှင့်အတူမူရင်းဗားရှင်းအဖြစ်အသုံးပြု "နားရွက်။ "
သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လေးထဲမှာကြော့ရှင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ကြိုက်တတ်တဲ့သူများရိုးရိုးအီတလီအမှတ်တံဆိပ် Hess ကနေဆက်စပ်ပစ္စည်းအာရုံစိုက်ရပေမည်။ ဤအမော်ဒယ်များ၏ဒီဇိုင်းကိုအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ခေတ်မီအလေးပေးပြောကြား, သို့သော်သင်လူအစုအဝေး၏အရိပ်၌ကျန်ကြွင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဖက်ရှင်အိတ်အိတ်ဟက် - ရုံနေရာလေးကိုအထောက်အ, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအပိုင်းအစမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုနှစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ collection များကိုထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးအရောင်အနီရောင်မှုန့မိုနိုခရုမ်ဣတ္နှင့်ကြားနေဖြစ်လာခဲ့သည်။
နေ့စဉ်လေးအတွက်နှစ်သိမ့်နှင့်လက်တွေ့ကိုပိုနှစ်သက်သူကိုအားကစားသမားများနှင့်မင်းသမီးဂျာမန်အားကစားအမှတ်တံဆိပ်၏ collection များကိုထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့စတိုင်ဖြေရှင်းချက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေအထည်အလိပ်ကျောပိုးအိတ်အိတ်နှင့်တူသောကျေးလက်သို့မဟုတ်မြို့ပြလမ်းလျှောက်ထွက်ခွာခန်းမထဲမှာရွရွပြေး, လေ့ကျင့်ရေးနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်ထောက်ဖြစ်လာသည်။ အားကစားအိတ်အိတ်တစ်လောကလုံးလွင်ပြင်အရောင်ကိုကိုယ်စားပြုပြီး, ပန်းဂျီဩမေတြီနှင့်စိတ္တဇ motif နှင့်အတူဒီဇိုင်းပုံနှိပ်။
တစ်အိတ်-အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဗီရို၏ဤမျှလောက်များစွာသောပစ္စည်းနှင့်အတူဤစတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသဟဇာတကြည့်။ စိတ်တိုင်းကျပုံစံလက်ကိုင်အိတ်တင်းကျပ်မှတ်စုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဝတ်ပျော့ပြောင်း။ ဂျင်းဘောင်းဘီ, leggings နှင့်ချွေးထွက်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ဣတ္ add ပါလိမ့်မယ်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်အိတ်နဲ့ ensemble အတွက်ရင်ခုန်စရာဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အဝတ်အလငျးနှင့်မူရင်းပေါ်လွင်စေပါသည်။ သို့သော် stylist တစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်အတွက် "သူတို့၏" မော်ဒယ်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုအလေးပေး။ ဥပမာအားဖြင့်, စီးပွားရေးကြက်သွန်နီအတွက်အထည်အလိပ်ဖက်ရှင်တွေဝတ်ကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ကိုင်အိတ်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုသိပါစေ:
kezhualnom ကြက်သွန်နီ၌တည်၏။ အဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့နေ့စဉ် wear ဘို့မဆိုအထည်အလိပ်များထို့အပြင်ထံမှရှေးခယျြနိုငျသညျ - ဂျင်း, burlap, corduroy, ဝါဂွမ်းနှင့်ပင်ကတ္တီပါ။ တစ်ဦးအလင်းစားဆင်ယင်သို့မဟုတ်စကတ်ပျံနှင့်အတူပုံရိပ်ကိုတရားစွဲထုတ်ကုန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါရောနှောပုံရိပ်တွင်။ ဤအလေးတို့သည်လည်းမတင်းကျပ်ကန့်သတ်ကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးကိုပေါင်းစပ်လောင်းကုတ်အင်္ကျီနှင့်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ခဲတံစကတ်နှင့် svitshota မလိုအပ်ပါဘူး sequins ကျောက်ခဲများနှင့်အခြားမည်သည့်တောက်ပ finish ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အလှဆင်ဖြည့်စွက်ရန်။
တင်းကြပ်ပေါင်းစပ်လက်အောက်တွင်၎င်း။ မည်သည့်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ရုံး ensemble အဘို့သားရေမော်ဒယ်လ်ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သို့သျောလညျးကိုသင်လက်စွဲ option ကို, နှင့်လက်တွေ့လက်ဝါးကပ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စေရွေးချယ်နိုင်သည်။
မော်ဒယ် capacious ပုံစံတင်ပြဖက်ရှင် collection များကိုတစ်ဦးကသီးခြားလိုင်း၌တည်၏။ မကြာသေးမှီကခေတ်ရေစီးကြောင်းအဆိုပါဂျိုးကြားဒေါတင်ပါးကနေခန္ဓာကိုယ်ပိတ်လိုက်နိုင်ကြောင်းကိုအပို-ကြီးမားတဲ့ပုံစံရှိသည်။ ကမ်းခြေသို့မဟုတ်မြို့လေးကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောချည်မျှင်နှင့်အထည်ဒီမူကွဲ။ လေ့ကျင့်ရေးအတှကျသကျဆိုငျရာအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းမော်ဒယ်။ ဖိနပ်အဘို့အထိုကဲ့သို့သောအိတ်-အိတ်ကြောင့်သင်တို့သည်၎င်း၏အရွယ်အစားအတူတူအပေါငျးတို့သ attribute တွေထားကူညီပေးသည်, အဝတ်အစားတစ်ခုထပ်တိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်ရှိခြင်းကနေကယ်တင်တော်မူ၏။ သားရေသို့မဟုတ်တရားစွဲအမြဲအာရုံကိုဆွဲဆောင်။ ဤသည်ဂျဖန်တီးမှုနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောပေါင်းစပ်ဘို့အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။
Laconic သပ်သပ်ရပ်ရပ်မော်ဒယ်မဟုတ်ဘဲအလှဆင်ပစ္စည်းများများ၏အမျိုးအစားသို့ကျလိမ့်မည်။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့သေးငယ်တဲ့အိတ်အိတ် - သာထိုကဲ့သို့သော့, နှုတ်ခမ်းနီ, ဆဲလ်ဖုန်းအဖြစ်လိုအပ်သောအသေးစိတ် attribute ။ မကြာခဏဤအမော်ဒယ်များ sequins, ဇာ, ပုတီး, sequins နှင့်အခြားမဟုတ်ချေနှင့်အတူလှပသောနှင့်ပင်မတ်ဒီဇိုင်းလုပ်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားထုတ်ကုန်စတိုင်ဖြည့်စွတ် ညနပေိုငျးပုံရိပ် ဒါမှမဟုတ် output ကိုပေါင်းစပ်။ monochromatic အရောင်ပုံစံမျိုးမရှိဘဲအသားရေသို့မဟုတ်တရားစွဲဒီအပိုင်းအစတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်ဝဲသို့မဟုတ်အဖြည့်စေရှိရာနေ့စဉ် wear အတွက်သုံးနိုင်တယ်။
ဥဿဖရားနှင့်အတူလက်စွပ် - လှပသီးသန့်ကွင်း၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
Marina က de Bourbon အမွှေးနံ့သာ
ရွှေလုပ်ထိုမှပါး - တိုင်းအရသာအဘို့အအလှဆုံး zloltyh ထိုမှပါးဓါတ်ပုံများတစ်ရွေးချယ်ရေး
DKNY အိတ် - အသစ်များကိုစုဆောင်းမှု
အဆင်းလှသောလက်စွပ်ကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လို - စိန်လက်စွပ်?
မော်နီကာ Bellucci ပလပ်စတစ်နှုနျးရန်အကြံပြု
တစ်ဦး 3d မျက်မှန်အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပျိုးပင်အဘို့အဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် - ယင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ?
Ficus benjamina - ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်အယူသီးမှု
အဆိုပါကလေးနေရောင်ထဲမှာအရမ်းပူဖြစ်ပါသည် - အပူချိန် 38